क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै, को-को छन् प्रतिस्पर्धी ? - Deshko News Deshko News क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै, को-को छन् प्रतिस्पर्धी ? - Deshko News
क्रान्तिकारीको नयाँ नेतृत्वका लागि भोलि निर्वाचन हुँदै, को-को छन् प्रतिस्पर्धी ?
नेकपा (माओवादी केन्द्र) निकट अनेरास्ववियु (क्रान्तिकारी) को नयाँ नेतृत्वका लागि बुधबार निर्वाचन हुँदैछ । बिहान १० बजेदेखि अपराह्न ४ बजेसम्म निर्वाचन हुने निर्वाचन समितिका संयोजक रमेश मल्लले जानकारी दिनुभयो ।
क्रान्तिकारीमा पहिलो पटक नेतृत्वका लागि निर्वाचन हुन लागेको अध्यक्ष नरेन्द्र न्यौपानेले बताउनुभयो । नयाँ नेतृत्वका लागि अध्यक्षमा अनिल शर्मा र रञ्जित तामाङ चुनावी मैदानमा हुनुहुन्छ ।
३३ पदाधिकारीसहित २४३ नयाँ केन्द्रीय समिति निर्वाचनले चयन गर्नेछ । निर्वाचनमा दुई हजार १५ मतदाता सहभागी हुनेछन् । यही भदौ ७ गतेदेखि भएको २१औँ सम्मेलनअन्तर्गत निर्वाचन कीर्तिपुरस्थित त्रिवि सभाहलमा हुनेछ ।